Gabadh Sucuudiga uga qayb gashay ciyaarta Olombikada oo guuldarro iyo Aflagaaddo la isugu daray(Daawo Sawirada) - iftineducation.com
aadan21 / August 12, 2012
iftineducation.com – Aabaha dhalay Gabadha Waddanka Saudi Arabia uga qayb gashay Ciyaarta Judo-ga ama Legdanka ee Olombikada London Wodjan Ali Seraj Abdulrahman Shaherkhani ayaa warqad cabasho ah u diray Wasiirka Arrimaha Gudaha Sucuudiga Boqor Ahmed Bin Nayef Bin Cabdulcasiis, kaddib markii gabadhiisa ay dad Sucuudiyaan ah ku aflagaadeeyeen bogga ay ku leedahay Twitter-ka.
Shaherkhani oo kulankeedii ugu horreysay ee ciyaarta Judo-ga oo ay la ciyaartay gabar ka socotay Dalka Puerto Rico oo lagu magacaabo Melissa Mojica laga adkaaday 82-Ilbiriqsi gudahood, ayaa si dhaqso ah isaga baxday garoonka.
is mari waa u dhexeeyey gabadhan Sucuudiyaanka ah ee xijaabka ku tartamaysay ama madaxa uu u daboolnaa iyo xiriirka Olombikada ayaa aakhirkii loo oggolaaday in ay madaxa daboolan karto, waxaana Shaherkhani oo ku tartamaysay ciyaarta Judo-ga gabdhaha culeyskoodu dhan yahay 78kg ay guuldarro kala baxday garoonka.
Aabeheed Ali Seraj oo horey u ahaan jiray garsoore ciyaarta Judo-ga ayaa aad uga xumaaday weerarradii lagu soo qaaday gabadhiisa ee lagu aflagaadeeyey bogga Twitter-ka, waxaana isagoo u warramayay wargeyska “Asharqal Awsat” uu yiri “Dhammaan dhambaalladii aflagaadada ahaa ee gabadhayda loo soo diray waxaan u diray Wasiirka Arrimaha Gudaha Boqortooyada Sucuudiga Boqor Ahmed Bin Nayef, Garyaqaan arrintaasi nooga doodana waan samaysanay”.
Shaherkhani oo baranaysay Judo-ga laba sanadood oo qura ayaa sababaha aflagaaddada loo soo gaarsiiyay ay tahay iyadoo Sucuudiga ay wax ceeb ama manuuc ah ka tahay in dumarku ka qayb gali karaan Isboortiga, taasoo Mashaa’ikhda Sucuudigu ay sheegeen in ka qayb galka ciyaaraha ee dumarku ay ka hor imaanayso shareecada Islaamka.
Waxa haatan la sugaaba waa Gabadha kale ee Sucuudiga uga qayb galaysa Orodka 800m Sarah Attar oo iyadana ku soo barbaartay dalka Mareykanka oo ciyaari doonta berri dambe oo Arbaco ah
xigasho allbanadir and GoolFm.net